Iloft eneebhedi ezi-5 eSibbetorps Gårdsbryggeri.
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguFredrik & Jenny
Indlu esandula ukwakhiwa ixhotyiselwe ngokupheleleyo ukuziphekela, malunga ne-60 sqm, eSibbetorps Gård & Bryggeri, phakathi kwePålsboda kunye neSvennevad, iikhilomitha ezingama-28 kumazantsi e-Örebro.
I-Attic ephezulu eneveranda yangasese kunye nemibono yeendawo zokuhlala.
Amagumbi okulala ama-2 (1x igumbi eliphindwe kabini + 1x igumbi elinye), igumbi lokuhlala elivulekileyo / ikhitshi, indlu yangasese eneshawa kunye nomatshini wokuhlamba (ngomrhumo).
Ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala kunye nemilinganiselo yebhedi (140cm x 200) ibonelela ngomlinganiselo webhedi onesisa kumntu omnye okanye abantwana ababini.
Kukwakho ne-loft yokulala ethi ngeleli ukusuka kwigumbi lokuhlala ibonelele ngekona yomntu omnye kunye netofotofo kumntu omnye.
Inani elipheleleyo labantu abadala balala i-5 (ubuninzi be-6).
Ingubo yokulala + 2 imiqamelo / umntu kunye nelinen yebhedi ifakiwe.
Ilinen yokulala ingafumaneka ngokucwangciswa.
Ikhitshi, elixhotyiswe ngokupheleleyo ngabantu aba-6, linobuninzi bezinto ezifunekayo kwindawo yakho yokuhlala. Isitovu, imicrowave / oveni, iketile, itoaster, ifriji enendawo encinci yesikhenkcezisi kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa, ibhasikithi yepikiniki inokufumaneka ngokuqeshwa.
IBarbecue iyafumaneka ukuze uboleke simahla.
Ibhaskithi ye-Barbecue kunye nokutya kunye ne-barbecue elungisiweyo inokufumaneka ngokuqeshwa.
Ukuba ukukhangela ngokukhawuleza kuyafunwa, ukucocwa kokugqibela / ukubuyisela kunokufunyanwa ngokuqeshwa.
ISibbetorps Gård iphakathi kweStockholm kunye neGothenburg malunga neeyure ezi-2.5 zokuqhuba kwicala ngalinye.
Kumda ophakathi kweNärke, Östergötland kunye neSörmland, malunga nemizuzu engama-20 ukuya eHallsberg, eKumla naseÖrebro kwaye malunga neyure enye ukuya eLinköping, eNorrköping naseKatrineholm.
Kuphela yi-300m ukusuka kuhola wendlela u-51 kodwa ifihlwe ngokupheleleyo yifama yethu apho iphela khona indlela,
Kwindawo entle edibeneyo enehlathi ngasemva kunye namasimi aqengqelekayo macala onke.
Indawo yokuhlala yimizuzu emi-5 kuphela ngemoto esuka eLake Sottern, apho kukho iindawo zokuhlambela eziliqela kunye nokuloba okuhle kakhulu kunye neGlottrasjön encinci.
Kwiindawo ezingqongileyo kukwakho namachibi amancinane okuloba aneentlanzi ezixabisekileyo ezifakelweyo.
ISibbetorps Gård ikwindawo yezolimo exubeneyo embindini wendalo kunye namaxhama azulazulayo, amaxhama, iimpungutye kunye namahashe amadlelo, iigusha kunye neenkomo.
Umhlaba othandekayo wokuhamba, ukubaleka, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukukhwela amahashe njl.
Iingoma ezibekiweyo zomthambo / iingoma zokutyibiliza ziyafumaneka kuzo zombini iPålsboda kunye neSvennevad.
Kufuphi nokuqubha kunye nokuloba eSottern, eGlottrasjön kunye namachibi amancinci aliqela, amanye aneentlanzi ezixabisekileyo ezifakelweyo.
Ukufutshane neendawo zogcino lwendalo ezininzi ezinje ngeHerrfallsäng, Kvismaren kwaye ngeyure enye ufikelela kwiipaki zelizwe iTiveden kunye neGarphyttan.
Indawo yogcino lwendalo i-Kvismaren's recreated amachibi namhlanje enza enye yeendawo ezimanzi ezipholileyo kuMbindi weSweden ukuba uyintaka - okanye uthanda ukukhangela iintaka. Ubuncinci entwasahlobo nasekwindla xa iintaka ezininzi ezifudukayo zithatha ithuba lokuphumla apha.
Ngentwasahlobo, kukwakho abaninzi abandwendwela induli i-Öby embindini wogcino, apho inani elikhulu leenyoka zihlangana phakathi kwamatye afudunyezwe lilanga ngaphambi kokuba ziphumele eKvismaredalen.
Amava okuhlambela kunye namachibi okuqubha ayafumaneka kuzo zombini iHolosberg, Kumla naseÖrebro.
Uninzi lwamava okutyela amnandi afana neBoo Natur, iVita Krala, iRestaurangen kunye neSkogen m.fl.
Ukuma kwiGolasi yeGosa eHjortkvarn phantse kunyanzelekile ehlotyeni, njengoko kunjalo ikofu kwenye yazo zonke iikhefi zasehlotyeni ezimangalisayo, ezinje ngeBoo Skola, kunye nezindlu ezinqabileyo kwimizi ethile, efana ne-Åkerby.
Kulabo abanomdla ekuzingeleni, kuninzi okufumanayo, kungakhathaliseki ukuba kugxininiswe kwiingulube zasendle, ixhama, i-roe deer, amakhowa, amajikijolo okanye imarike yeflea.
Ukuba kukuzingelwa kweevenkile, amacebiso ethu angcono Mariebergs Köpcentrum (imizuzu eyi-15), Örebro (imizuzu engama-20), iVingåkers Factory Outlet (imizuzu engama-25).
E-Sibylla Fabriksförsäljning (imizuzu eli-10) kukho iisoseji ezinobude kunye nezinqamlezileyo.
Amagcisa amaninzi eza ePålsboda Folkpark ngexesha lasehlotyeni, kwiSikolo saseBoo kukho ukonwatyiswa kwangokuhlwa kwaye usaziwayo wesizwe u-Örebro "Hjalmar" ubamba imiboniso eBrevens Bruk.
Umgama oyi-2.4 km ukuya ePålsboda apho kukho zombini ikhiosk, iipizzeria, ivenkile yegrosari, ikhemesti, ibhanki, iATM, iposi, ihardware & nevenkile yokupeyinta, iziko lezempilo, isikhululo segesi nokunye.
I-13 km ukuya e-Kvarntorp kunye neekhosi zombini yegalufa, umkhondo wokuzilolonga, i-jet ski, i-ski slope okanye kutheni "ungakoyisi izitebhisi", emva koko undwendwele indlu yekofu kwaye ubone "Ubugcisa obuphezulu".
Ukuba kukho into ekhethekileyo oyikhangelayo, zive ukhululekile ukusibuza - sinamacebiso ubukhulu becala.
Umbuki zindwendwe ngu- Fredrik & Jenny
Ukuba awusifumani sijikeleze intendelezo, wamkelekile ukuba unkqonkqoze emnyango wendlu okanye kwindawo yotywala xa sisekhaya.
Ukuba unomdla kukhenketho lwe-brewery, kunokwenzeka ukuba ubhukishe idinga ngokuqeshwa - mhlawumbi ngokucela ngokuthe ngqo xa ubhukisha indawo yokuhlala okanye nathi kwisiza.
Ungasifumana sobabini ngokukhawuleza ngefowuni, umyalezo obhaliweyo okanye i-imeyile ukuba unayo nayiphi na imibuzo, iinkxalabo okanye ufuna iingcebiso.
Ukuba unomdla kukhenketho lwe-brewery, kun…
UFredrik & Jenny yi-Superhost